SomaliTalk.com » 2013 » August » 17
Home » Archive Maalinta August 17th, 2013
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, ayaa magacaabay 15-kii bishan laba guddi oo heer wasiir iyo mid farsamo ah kuwaas oo soo baara eedeynta la xariirta fal kufsi ah oo lagula kacay gabar Soomaaliyeed. Guddigan oo ay madax u tahay Wasiirka Adeega Bulshada Drs. Maryam Khaasim Axmed ayna xubno ka yihiin Wasiiro iyo saraakiil ciidan ayaa saaka...
“HAWEENKA SOOMAALIYEED, DUMAR AAN RAG LAHAYN”
Tani ma ahan mid loo dulqaadan karo ( We can`t tolerate beyond of this). Waxaan ku bilaabayaa magaca Allaha sharafta iyo maqaamka weyn dumarka ka siiyeey diinta Islaamka ee ilaalisa xuquuqda uu qof walbaa leeyahay. Ugu horeyntii waxaan si tiiraanyo leh ugaga tacsiyeyenayaa gabadha Soomaaliyeed ee sharafteeda sida xun loogu xadgudbay laguna bahdilay ayada oo dalkeedii hooyo joogta, oo waliba joogta...
Ma ahan markii ugu Horaysay oo Ciidamo ka tirsan kuwa Dowlada federaalka Soomaaliya lagu Eedeeeyo iney Rasaas Nool Nool u Adeegsadaan Dad Rayid ah oo ku nool meelo badan oo ku yaala Geyiga Soomaaliya, Bartamihii Todobaadkii hore Agagaarka Warshaddii hore Caanaha waxaa gaaray sida ay sheegeen Dadka Deegaanku Qaar ka mid ah Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka , waxayna Ciidamadaasu oo Adeegsanayey...
Wariye Axmed Shariif oo Shaqeynayey Radio Muqdisho oo lagu Diley Magaalada Muqdisho
Kooxo ku Hubeysan Bistoolado ayaa maanta Degmada Shibis ee Gobolka Banaadir ku dilay Axmed Shariif Xuseen oo ka mid ahaa shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta. Axmed Shariif Xuseen oo ahaa Eng guud ee Farsamada idaacada Radio Muqdisho iyo SNTV ayaa la dilay xili uu ka soo baxayay Gurigiisa kuna soo jeeday shaqada. Eng Axmed Shariif Xuseen oo horey uga soo shaqeeyay idaacadii Hornafrika iyo idaacado kale...